Soo dejisan Avast Clear 20.5.5410 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaAvast Clear
Bogga rasmiga ah: Avast Clear
Avast Clear – qalabka si aad u gebi ahaanba uga saarto raadadka ay ka tagaan qalabyada ammaanka Avast. Barnaamijka waxaa loogu talagalay in uu ku shaqeeyo haddii macaamiilada antivirus aysan si dhammaystiran loo tirtirin habka caadiga ah, ama haddii khaladaadku soo muuqdaan inta lagu jiro saarista. Avast Clear wuxuu kaa caawinayaa inaad ka soo saarto faylasha haraaga ah, darawallada iyo diiwaanka diiwaanka kuwaas oo ku xiran xirmooyinka Avast sida Antivirus Free, Pro Antivirus, Internet Security, Premier, iwm. Macluumaadka haraaga ah ee haraaga ah, ka dib markaa wax walboo dhan oo shirkad ah ayaa si guul leh looga saari doonaa. Avast Clear waxay isticmaashaa khayraadka nidaamka ugu hooseeya, taas oo xoojisa xawaaraha sare.
Nadiifinta kombiyuutarka ka baxa xogta Avast
Taageerada aan la saarin dhammaan badeecooyinka Avast
Hab fudud oo si degdeg ah looga saaro
Soo dejisan Avast Clear
Faallo ku saabsan Avast Clear
Avast Clear Xirfadaha la xiriira